काठमाडौंको बुद्धनगरमा शौचालयमा किशोरीसँग ‘यौन सम्पर्क’ गर्दागर्दै सेनाका मेजर पक्राउ ! – Todays Nepal
काठमाडौंको बुद्धनगरमा शौचालयमा किशोरीसँग ‘यौन सम्पर्क’ गर्दागर्दै सेनाका मेजर पक्राउ !
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Jan 11, 2018
‘क्याटबरी खाइरहेकी थिएँ । अंकलले चुप्पा गर्नुभयो । मैले पनि अंकल भनेर म्वाई खाएँ । पहिला पहिला पनि मायाँ गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले नै मेरो हात तल गरेर यहाँ छोउ भन्नु भयो । डर लाग्यो नाई अंकल भनेँ । तर, केही हुँदैन नानु भनेर सम्झाउनु भयो ।
एसएलसी जस्तै फलामे गेट नेपाली सेनाको मेजरबाट धेरै माथि उक्लिनका लागि उत्तिर्ण गर्नुपर्ने स्टाफ कलेज प्रवेश परिक्षा दिन काठमाडौं आएका मेजर प्रभव विक्रम शाह परिक्षास्थलमा होइन अन्यत्रै अल्मलिँदा ठूलो समस्यामा छन् । बाग्लुङस्थित २३ बाहिनीमा पोष्टिङ भएका उनी स्टाफ कलेज इन्ट्रान्सका लागि छुट्टिमा आएका थिए । १९ गतेदेखि इन्ट्रान्स तर १४ गते नै अर्को ‘इन्ट्रान्स’मा छिर्दा आपतमा परेका छन् ।
बुद्धनगरस्थित आफन्तको घरमा पहिला पनि आउ जाउ गर्थे । सेनाको करिअरवाला अफिसरले नराम्रो केही गर्लान भनेर नराम्रो कसैले सोच्ने कुरा भएन । तर, आएका बेला परिवारका अरु सदस्यको त्यति ख्याल नगर्ने, गाउँबाट पढ्न आएकी र परिवारसँगै बस्ने किशोरीलाई बढी समय दिने । परिवारका सदस्यल किशोरीलाई सोधे तर, उनले ‘अंकलले खाने कुरा ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने मात्रै गरेकी थिइन् ।
एकचोटी आएको बेला घरका सदस्यले निगरानी गरे । शौचालयको भेन्टिलेटरमा हेरे । दृष्य सामान्य थिएन । प्रभव किशोरीबाट यौन व्यबहार गराईरहेका थिए । उनलाई हात र मुखबाट मैथुन गराउने कार्यमा थिए । परिवारका सदस्यले प्रहरीलई फोन गरे । प्रहरी पुग्दासम्म उनीहरु बन्द कोठामा भित्रै थिए । ढक्ढक्याएको केही समयपछि मात्रै ढोका खोले ।
‘हामीलाई यहीँबाट आएको इन्फरमेशनको आधारमा हजुरलाई लिन आएको ।’ प्रभवले जान आनकानी गरे । आफ्नो परिचय बताए । शैनिक मुख्यालयको अनुमति विना लैजान नमिल्ने अडान लिए । तर, प्रहरीले मानेनन् । यसबीच किशोरीलाई परिवारका आफन्तले आफू तिर लगे ।
अस्विकार गर्दा गर्दै मेजर प्रहरीको गाडीमा चढाईए । प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि उनले भने,‘त्यस्तो केही होइन मैले उसलाई पढाईको लागि सपोर्ट गर्ने गरेको छु । काठमाडौं आएको बेला खर्च छाडेपछि, कपि कलमहरु किनिदिएर पढाईको बारेमा सोपध्दै थिएा ।’ प्रहरीले भने,‘हामीलाई एसइए (सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एण्ड एब्युज) मा रिपोर्ट आएको छ ।’ उनले इम्पोसिबल भन्दै अस्विकार गरे ।
तर, एकछिनमै किशोरी त्यहाँ आइन् । उनले पनि सिधै केही भनिहाल्न सकिनन् । प्रहरीले सोधे,‘अंकलले तिमीलाई के के गर्नु भयो ? नडराई भन ।’ किशोरीले सुनाईन्,‘मैले नाइ भन्दाभन्दै पनि अंकलले केही हुँदैन भनेर विभन्न ठाउँमा ‘चुप्पा’ गर्न लगाउनु भयो ।
प्रहरीले किशोरीको स्वास्थ्य परिक्षण गरायो । निरन्तर रक्तस्राव भइरहेको रिपोर्ट आयो । महिनावरी पनि नभएको किशोरीको त्यस्तो हालत हुनुको एउटै कारण थियो,‘यौन सम्पर्क’ । प्रहरीले सेनाको हाकीम समातिएपछि शैनिक प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने भयो ।
त्यहाँ पुगेका शैनिक प्रहरी हाकिमले प्रभवलाई आफूहरुकै हिरासतमा राखिने र शैनिक ऐन अनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने भनी जिम्मा लिन खोजे । तर, प्रहरीले प्राविधिक समस्या दर्शायो बुधबारको जनआस्था साप्ताहिक ले यो खबर प्रमुखताका साथ छापेको छ ।
जापानमा बढी काम गर्ने १ हजार बढी विदेशी विद्यार्थी कारवाहीमा
कोरियामा हुण्डी बन्द भए संगै अब कोरिया सरकारको आखा बिटक्वाइन कारोबारमा